Tababareyaasha u shaarraxan abaal-marinta macallinka bisha Agoosto ee Premier League oo la shaaciyey – Gool FM
“Sheekadu wali ma dhamaan, waxaana u bixi doonaa in Man City aan ku soo garaacno garoonkooda” – Zidane
Lyon oo guul kaga gaartay Juventus Groupama Stadium kulanka lugta hore wareega 16-ka ee tartanka UCL… + SAWIRRO
Manchester City oo guul soo laabasho ah ka soo gaartay Real Madrid kulanka lugta hore wareega 16-ka ee tartanka UCL… + SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Lyon iyo Juventus ee tartanka Champions League oo la shaaciyay
Shaxda rasmiga ah kulanka Real Madrid iyo Man City ee tartanka Champions League oo la shaaciyay
Tababare hore ee kooxda Real Madrid ah oo si weyn u ammaanay Jurgen Klopp
Willian oo shaaca ka qaaday war cusub ee ku saabsan mustaqbalkiisa kooxda Chelsea
Arsene Wenger oo sharaxay sababta ay Chelsea guuldarro culus uga soo gaartay Bayern Munich
Tababareyaasha u shaarraxan abaal-marinta macallinka bisha Agoosto ee Premier League oo la shaaciyey
Haaruun September 6, 2019
(England) 06 Sebt 2019. Waxaa maanta la shaaciyey tababareyaasha afarta ah ee u sharraxan abaal-marinta macallinka bisha Agoosto ee horyaalka Premier League ugu fiicnaa bishii la soo dhaafay ee Agoosto.
Macallin Pep Guardiola ayaa ka mid ah tababareyaasha u tartamaya abaal-marinta macallinka bisha ee horyaalka Premier League, waxaana hoggaamiyaha reer Spain uu tartamayaa inuu markiisii siddeedaad ku guuleysto.
Pep kooxdiisa Manchester City ayaa badisay saddex kulan, isla markaana ay barbaro gashay hal kulan afartii ciyaarood ee ugu horreysay xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League, iyadoo kooxda ku dheesha garoonka Etihad ay mudadaas dhalisay 14 gool, waxaana laga dhaliyey saddex gool oo qura.
Waxaa la tartamaya macalinka kooxda Liverpool oo kooxdiisa ay hogaamineysa horyaalka ka dib markii ay wada badiyeen dhamaan afartii kulan ee ay ciyaareen bishii hore oo ay ku jirto kulankii ay ka badiyeen Arsenal.
Macallinka kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa isaguna ka mid noqday xiddigaha u tartamaya abaal-marinta tababaraha bisha ee horyaalka Premier League kaddib markii ay natiijooyin wax ku ool ah kooxdiisu soo hoysay kulamadii ay dheeshay.
Waxaa isna sidoo kale sharraxan tababaraha kooxda Crystal Palace ee Roy Hodgson oo ah tababaraha ugu da’da wayn taariikhda horyaalka isagoo jira 72 sanno.
Macallin Hodgson waxa uu kooxdiisa ku hoggaamiyey guushii 2-1 oo ay garoonka Old Trafford kaga gaaren Manchester United, iyagoo sidoo kale labo kulan shabaqooda gool ka ilaashaday taasoo ka dhigaysa kooxda ugu difaaca fiicnayd bishii hore.
Tababaraha kooxda Leicester City ee Brendan Rodgers ayaa isna dhammaystiraya afarta tababare ee u sharraxan abaal-marinta macallinka bisha ee Premier League, isagoo kooxdiisa ku hoggaamiyay kaalinta saddexaad ee horyaalka Ingiriiska.
Man United oo ku dhawaaqday liiskeeda rasmiga ah ee xiddigaha kaga qeyb galaya Europa League xili ciyaareedkan 2019-2020
Waa kuma shaqsiga Virgil van Dijk ka hor istaagay inuu ku biiro kooxda Manchester United?